Awood Joogitaan: Intee in le'eg ayaad socon doontaa? | Martech Zone
Awood Joogitaan: Intee in le'eg ayaad socon doontaa?
Arbacada, December 12, 2007 Khamiis, Juun 11, 2015 Douglas Karr
Dhexdhexaad kasta oo aad doorato wuxuu leeyahay faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa - midkood oo aan inta badan laga wada hadlin waa awoodda joogitaanka ololaha.
Seth ayaa wax ka qoray Reebok dhowr toddobaad ka hor iyo sida ay u leeyihiin olole firfircoon oo firfircoon oo ay, nasiib darro, ka tageen. Derrick Daye ayaa magacaaba taxanaha taxanaha ah Top 5 Best Superbowl Xayeysiis abid! Tag goobta, in kastoo, iyo adiga hel qalad 404.
Maanta, waxaan soo galnay mid ka mid ah casharradeenna iibiyaha oo waxaan ogaanay in fiidiyowgu uusan mar dambe u dhigmin cusbooneysiinta ka socota is-dhexgalka. Halkii looga faa'iideysan lahaa fiidiyowyo cusub si looga hadlo isbeddelada iyo sababta ay u weyn yihiin, dadka wax ka baranaya casharrada ayaa jahwareer ku dhacay Alla maxay nasiib darro suuqgeyn lumisay! Haddii aad leedahay astaamo aad u wanaagsan, waa inaad ugu yeeraysaa fiidiyahaaga!
Dib ugu soo laabo qodobka… mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee fiidiyowga ayaa ah awooddiisa waarta ee sheeko ahaan sheeko ahaan. Qoraallada Blog do aakhirkiina taariikhda ka bax. Xilliyadu way is beddelaan, dadka wax qora ee wax qora ayaa beddelaya maskaxdooda, ama baloog kale ayaa shaqo fiican qabta oo dareenka hela. Waxaan arkay qoraalo laba qoraalo ah oo ay soo qoreen asxaabteyda halkaasoo aan ku iri, "haye… waxaan qoray bil ka hor!" Qiyaas waxa Macno malahan!
Qoraalada blog-ku ma laha awood joogitaan oo aad u maleyn karto. Qiyaas duluc ka kooban content waxyaalaha duugga ah ee salka hoose ku uriya. Waa duug oo cidina ma heli karto mar dambe. Waxaa lagu beddelay waxyaabo cusub. Qaar ka mid ah qorayaasha internetka aniga oo kale ah waxay isku dayaan inay soo nooleeyaan waxyaabaha hore iyagoo tixraacaya qoraal ama adeegsanaya laxirka laxirka laxiriira. Qoraallada la xiriira ayaa ah Viagra-ka wax qorista. Waxay sii dheereysaa nolosha boostada wax yar, laakiin dib uma soo nooleyneyso oo dib uguma soo celinayso dusha sare ee foofka.
Haddii aan eegno dhexdhexaadiyeyaasha kale, waxay heleen darajooyin kala duwan oo ah inay sii joogaan awoodda sidoo kale. Telefishanku wuxuu leeyahay qiyaastii 10 ilbiriqsi oo joogitaan ah (illaa aad dib ugu noqotid maalmihii Johnny Carson iyo 3 shabakadaha). Raadiyuhu wuxuu leeyahay daqiiqado yar. Wargeysyada maalinlaha ah waxay leeyihiin maalin. Wargeysyada Axadda waxay yeelan karaan toddobaad. Websaydhadu waxay qaadan karaan dhowr bilood illaa hal sano. Qoraallada Blog-ka ayaa laga yaabaa inay socdaan dhowr maalmood illaa toddobaad. Boostada tooska ah waxay socotaa inta udhaxeysa sanduuqa boostada iyo qashinka can
Laakiin Video! Halkan waa 4 sano kadib, welina waan ku qosleynaa Terry Tate, Xafiiska Linebacker:
Wax ay tahay in maskaxda lagu hayo marka aad ka fekereyso ku noqoshada Maalgashiga Suuqgeynta, maahan?
Tags: duudduubansoo celinta suuq geynta maalgashigaxafiiska linebackerseth godinviagra
Xagee dhigaa Blog-ga shirkadeed?
Macaamiil Cay Cay
12, 2007 at 8: 03 PM
Doug, taasi waa wali tii aan ugu jeclaa SB ganacsiga waqtiga oo dhan. In kasta oo ay tahay inaan qirto waan ilaaway inay ahayd Reebok.
12, 2007 at 8: 19 PM
Farriin weyn WOOOOO !, Waan ku raacsanahay in fiidiyowgu yahay mid muddo dheer soconaya. La iima iibin fiidiyowgaas waa mawjadda cusub ee Suuqgeynta ROI in kastoo. Waxaan u maleynayaa in shirkado aad u yar ay "helaan" fiidiyowga iyo waxa ay u baahan tahay inay ka dhigaan kuwa ugu dambeeya. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida shirkaduhu u adeegsadaan fiidiyowga isla markaana macaamiisha ay u isticmaalaan hadda in qadka iyo shabakadaha bulshada ay u oggolaadaan fiidiyowgu inuu si fudud ku faafo.
12, 2007 at 10: 41 PM
Dhowr xayeysiis superbowl ah ee la soo dhaafay hae cimrigayga oo dhan ila sii joogo, waan jeclahay em. Waxaan ka walwalsanahay haddii aan wax ka xusuusto wax badan oo ku saabsan abuurayaasha in ka badan astaanta in kastoo. / garbaha
Iyada oo Patriots ay xukumayaan waxaan sharad ku arkaynaa inaan aragno mawduuc aan caadi ahayn oo "waddaninimo" ah sannadkan iyada oo xayeysiiyayaashu rajaynayaan NE inay ka dhigto ciyaarta weyn.
Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar
12, 2007 at 11: 36 PM
Waxaan ku maqlaa adiga oo cad oo cad. Si kastaba ha noqotee, waxaan la yaabanahay sidee ku dhacday Shakespeare ama qaar ka mid ah qorayaasha kale ee waaweyni inay u adkeysan karaan burburka qarniyadii. Ma jiro wax fiidiyoo ah. Waxaa laga yaabaa inay tahay uun in jiilkeennu doorbidayo sawirrada ka soo horjeedka ereyga qoran.
13, 2007 at 3: 49 PM
Sababtoo ah waxay si fiican ugu sawiraan sawirro erayo leh. Markay ereyadu rinjiyeeyaan sawirka shaqsi waliba wuxuu arkaa -waxaa ku jira maskaxdooda - sawir “gaar ah” Halka TV-yada / aflaanta nalagu qasbay inaan aragno fasiraad qof kale halkii aan si dabiici ah u sameysan lahayn midkeenna.
13, 2007 at 1: 18 PM
Wow, waa wax la yaab leh in ganacsigaasi wali awooddiisa sii joogo - waa uun nacalad qosol leh!
@ Alex Waxaan sidoo kale ilaaway inay ahayd Reebok in kastoo. Taasi maxay leedahay?
U fiirso sheyga waqtigiisu dhacay ee ganacsiga? "Taasi waa wacitaan fog, Doug!" Hmm, ha u maleynin inay taasi tahay wax weyn wixii dambe.
Si kastaba ha noqotee, wali waa qosol badan.